2019 #NABShow: 5G သင့်အနီးအနားရှိမြို့တစ်မြို့သို့လာပါ။ | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » အသားပေး » 2019 #NABShow: 5G ကိုသင်အနီးတစ်စီးတီးမှလာ!
2019 #NABShow: 5G ကိုသင်အနီးတစ်စီးတီးမှလာ!
တိုင်းပြည်အနှံ့အချို့သောမြို့ကြီးများမြင့်မားသောဒေတာနှုန်းဝါကြွားတတ်ထားတဲ့ 5th မျိုးဆက်ဆယ်လူလာဝန်ဆောင်မှုအောင်းနေချိန်အတွင်းလျှော့ချရေး, စွမ်းအင်ချွေတာ, ကုန်ကျစရိတ်လျှော့ချရေး, ပိုမိုမြင့်မားသည့်စနစ်စွမ်းရည်များနှင့်ဧရာမစက်ကိုဆက်သွယ်မှုကြုံနေရပါပြီ။ ဖြန့်ချိ-5 ပြီးစီးအတွက် 15G သတ်မှတ်ချက်များများ၏ခန့်မှန်းခြေပထမအဆင့် 2019G ဟာနေ့စဉ်ဆယ်လူလာစားသုံးသူများအတွက်စံအောင်အစောပိုင်းစီးပွားဖြစ်ဖြန့်ကျက်လိုက်လျောညီထွေတံ့သောဧပြီလ5ဘို့စီစဉ်ထားသည်။ ဖြန့်ချိ-16 အတွက်ဒုတိယအဆင့် IMT-2020 နည်းပညာတစ်ခုကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ်နိုင်ငံတကာဆက်သွယ်ရေးသမဂ္ဂ (ITU) မှတင်သွင်းခဲ့တဲ့အဘို့အဧပြီလ 2020 အားဖြင့်ပြီးစီးစေမည်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ 2019 #NABShow ကံကြမ္မာ 5G featuring ပါလိမ့်မည်။ တက်ရောက်ရှေ့ဆက်အထူးသဖြင့်မီဒီယာ, ဖျော်ဖြေရေးနှင့်ရိုးရာအကြောင်းအရာပေးပို့မော်ဒယ်များကျွန်တော်တို့ရဲ့ကမ္ဘာကြီးထဲမှာတစျခုလုံးကိုစက်မှုလုပ်ငန်းများပြောင်းလဲပေးလိုက်နိုင်ကြိုးစားနေပါကြောင်းသောဤမျိုးဆက်သစ်ကြိုးမဲ့နည်းပညာများ၏ဖြစ်ဖို့အခွင့်အလမ်းရလိမ့်မယ်။ (ထိုများစွာသောအချို့ကို) အစည်းအဝေးများမီးမောင်းထိုးပြအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောများမှာထောက်ပံ့:
5G, ATSC 3.0 & ယင်းက Hyper Convergence အဘို့ကိုနားလည်ခြင်း & စီမံကိန်း: ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာစူပါပြိုင်ဘက်တစ်ဦးခေတ်ပြိုင်ဂျာနယ်သို့မဟုတ် Dawn ၏အဆုံး? တနင်္လာနေ့, ဧပြီ 8 | 2: 00 ညနေ - 3: 00 ညနေ | SU13306 ။ အနှစ်ချုပ်: Video streaming အနာဂတ်အင်တာနက်, 70G, IoT & Smartcities ကွန်ရက်များကျော်သယ်ဆောင်ခံရဖို့ + အသွားအလာ 5% ပါဝင်မှစီမံကိန်းဖြစ်ပါတယ်။ မျှော်လင့်တှငျကြှနျုပျတို့, reinvent တိုးချဲ့နှင့်ထုတ်လွှင့် reinvigorate ဖို့အလားအလာရှိကြောင်းက Hyper ဆုံအခြေခံအဆောက်အအုံတစ်ဦးကိုနောက်မျိုးဆက်တစ်ခုအကူးအပြောင်းရောကျခါနီးပွီနေကြသည်။
အပိုင်း5- 1G immersive မီဒီယာတွေ့ဆုံ။ တနင်္လာနေ့, ဧပြီ 8 | 4: 00 ညနေ - 4: 30 ညနေ | SU13306 ။ အနှစ်ချုပ်: VR ပြောင်းလဲမှု၏ချောက်ကမ်းပါးပေါ်သည်။ 5G ၏ထွန်းနှင့်အတူရုပ်ရှင် VR ၏ဖန်တီးမှုနှင့်စီးပွားရေးအလားအလာသော့ဖွင့်ခံရဖို့အဆင်သင့်ပါပဲ။ 100 ကြိမ် 4G LTE ကို၏ bandwidth ကိုမှာ 5G မြင့်ချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်, VR အဘို့ဖန်ဆင်းတော်မူ၏ကြောင်းမြင့်မားသောသစ္စာအသံနှင့်ဗီဒီယိုကယ်မနှုတ်နိုင်။ စက်မှုလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူများကရော့ Koenen နှင့်အခြားသူများကို Join ။
ဂြိုဟ်တု - 5G ၏အနာဂတ်။ အင်္ဂါနေ့, ဧပြီ9| 10: 30 နံနက် - 11: 00 နံနက် | SU13306 ။ အနှစ်ချုပ်: အဆိုပါမြေပြင်မိုဘိုင်းလုပ်ငန်း 5G သတ်မှတ်ချက်ဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့်မီးလောင်အမြန်နှုန်းကတိပေးတစ်ကွန်ယက်၏ဖြန့်ကျက်စတင်ကြိုးစားလုပ်ဆောင်နေသည်။ အဲဒီကွန်ရက်ကအစ High-bandwidth ကို low-အောင်းနေချိန်ဝန်ဆောင်မှုကိုထောကျပံ့ဖို့ဆဲလ်ဆိုဒ်များအများကြီး သာ. ကြီးမြတ်သိပ်သည်းဆအပေါ်မူတည်ပါလိမ့်မယ်။ , စီမံခန့်ခွဲ 5G ဖြန့်ကျက်မှုကုန်ကျစရိတ်ကိုစောင့်ရှောက်ရန်။
အပိုင်း5- 2G immersive မီဒီယာတွေ့ဆုံ။ အင်္ဂါနေ့, ဧပြီ9| 4: 00 ညနေ - 4: 30 ညနေ | SU13306 ။ အနှစ်ချုပ်: VR ပြောင်းလဲမှု၏ချောက်ကမ်းပါးပေါ်သည်။ 5G ၏ထွန်းနှင့်အတူရုပ်ရှင် VR ၏ဖန်တီးမှုနှင့်စီးပွားရေးအလားအလာသော့ဖွင့်ခံရဖို့အဆင်သင့်ပါပဲ။ 100 ကြိမ် 4G LTE ကို၏ bandwidth ကိုမှာ 5G မြင့်ချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်, VR အဘို့ဖန်ဆင်းတော်မူ၏ကြောင်းမြင့်မားသောသစ္စာအသံနှင့်ဗီဒီယိုကယ်မနှုတ်နိုင်။ စက်မှုလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူများကရော့ Koenen နှင့်အခြားသူများကို Join ။
, ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်း, လိုက်ဖက်မ Technologies ကအဖြစ် ATSC 3.0 နှင့် 5G ။ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, ဧပြီ 10 | 2: 00 ညနေ - 2: 30 ညနေ | SU13306 ။ အနှစ်ချုပ်: 5G ပတျဝနျးကငျြကလက်ရှိစကားပြောဆိုမှုများ၏အများကြီးကြိုးမဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်မည်သို့သယ်ဆောင်ကြိုးမဲ့နည်းပညာများ၏မျိုးဆက်သစ်များအတွက်၎င်းတို့၏ကွန်ရက်များပြင်ဆင်နေကြသည်အပေါ်သက်ရောက်မှုတဝိုက်ဗဟိုပြုထားသည်။ ဝေးနည်းပါးလာဆွေးနွေးမှုများ 5G ထုတ်လွှင့်နည်းပညာနှင့်ထုတ်လွှင့်ဖို့အကျိုးကျေးဇူးများအပေါ်ရပါလိမ့်မယ်အကျိုးသက်ရောက်မှုအပေါ်အရပျကိုယူကြပြီ။
တစ်ဦး 5G ကမ္ဘာ့ဖလားအတွက်နယူးပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး: Frenemies ကျော်လွန်ပြီး။ ကြာသပတေးနေ့, ဧပြီ 11 | 10: 30 နံနက် - 11: 00 နံနက် | SU13306 ။ အနှစ်ချုပ်: 5G နှင့်အတူသယ်ဆောင်တူညီသောသို့မဟုတ်အောက်ပိုင်းစျေးနှုန်းများမှာပိုပြီးအမြန်နှုန်းနှင့်စွမ်းရည်များကိုပူဇော်သက္ကာဘို့၏အလားအလာကိုရင်ဆိုင်ရသူတို့ပေါ်ထွက်လာသောကျယ်ပြန့်ဂေဟစနစ်ပုံဖော်တစ်ခုတိုးချဲ့အခန်းကဏ္ဍယူမလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ မိုဃ်းတိမ်ကိုမှအချက်အလက်များကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုနှင့်ဖောက်သည်စီမံခန့်ခွဲမှုမှဖြေရှင်းချက်ပေးသူအလားတူ positioning ကို 5G များအတွက်ရှာဖွေနေကြသည်ဖြန့်ကျက်သည်။
2015 2016 NAB ပြရန် 2016 NAB Show ကိုယောဘသည်တရားမျှတသော 2016 NAB ပြရန်သတင်းများ ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး ထုတ်လွှင့် Beat ဆုပေးပွဲ ထုတ်လွှင့် Beat မဂ္ဂဇင်း ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း အသံလွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း H264 / H265 HDR HDR / WCG HEVC HEVC / AVC စွဲငြိဖွယ်ရာ isovideo JCT-VC ကို NAB 2015 NAB 2016 NAB ပြရန် Show ကို 2016 NAB NAB ပြပွဲအလုပ်အကိုင်များ NAB Show ကို Las Vegas မှ Show ကိုမှတ်ပုံတင်ခြင်း NAB NAB16 nabshow လူငယ်ကဏ္ဍ Show ကိုအမျိုးသားအစည်းအရုံး ဆူညံသံလျော့ချခြင်း UHD / 4K / HD ကို viarte Warsaw ကို 2019-02-27
ယခင်: Veritone Core များနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာ Hub နှင့်အတူရွှေ Boy ပရိုမိုးရှင်းများအတွက် One-နှစ်ဦး Combo ကယ်ယူမှသဘောတူညီချက်ကြေညာ
နောက်တစ်ခု: Bannister Lake ရေကန် 2019 NAB Show ကိုအသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာနှင့်သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာညီလာခံ (BEITC) မှာတင်ဆက်ဖို့